Ny tondra-drano natolotr'i Shina dia mamela mpitaingina, mpitondra entana mitondra herinaratra, mpamily fiarakodia, mpamatsy fiara mpitatitra mandeha mivantana
Description:Ny Safodrano nitondra tondra-drano,Power Led Driver,Led Driver,Mpanafaka enta-mavesatra mitatao ambadika,,
Home > Products > Mpanafatra fanaovan-tserasera > LED Flood Lights Driver
Ny vokatra avy amin'ny LED Flood Lights Driver , mpanofana manokana avy any Shina, Ny Safodrano nitondra tondra-drano , Power Led Driver mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Led Driver R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Shoebox Fixture Mpitaingina Mpanazava  Contact Now
Tondradrano jiro tsy tapaka ankehitriny  Contact Now
Shoebox Fixture Mpitaingina Mpanazava
Vidin'ny singa: USD 8.5 / Piece/Pieces
FD-55H-054B, natao manokana ho an'ny hazavana shoebox IP67, fampiharana ny tondradrano, mba hampiasana ny fampiharana amin'ny jiro LED maneran-tany. LED Driver 55W 1800mA, miaraka amina tombo-kase 45-55W, UL, CB, CE mifanaraka, vokatra...
Tondradrano jiro tsy tapaka ankehitriny
Shina LED Flood Lights Driver mpamatsy
Fahold, orinasa 8 taona dia mitondra herinaratra mafampana eo amin'ny fiainanao amin'ny alàlan'ny manazava ny birao, orinasa, trano fitehirizana, fivarotana, seranana, sns. Miaraka amin'ny mpamily LED avo lenta izay manome vokatra sy vahaolana. Fahold dia maniry hanome anao tontolo ara-pahasalamana ambany sy ambany amin'ny angovo ambany. Amin'ny alàlan'ny famokarana maneran-tany sy ny certification isan-karazany, anisan'izany ny CE, UL FCC sy SAA, ny vokatra avy amin'ny mpamily dia amidy eny an-tsena ary amidy any amin'ireo tsena iraisam-pirenena, Etazonia, UK, Frantsa, Alemana, Aostralia, Afrika, Korea sns.
Fampiharana: indrindra ho an'ny hazavana mitoka-monina, AC100-277V, 1-1.7A Constant mpamily mitondra loharano ho an'ny tsy miankina amin'ny rano.
Advantage: fiarovan-dalamby fohy, kilasy 2 satety output design, nandalo ny UL / FCC / TUV / RCM / CB / CE Certified. Ara-dalàna ny tsena Eorope sy Amerika Avaratra.
Volana fanoratana: 100-277V
Ny Safodrano nitondra tondra-drano Power Led Driver Led Driver Mpanafaka enta-mavesatra mitatao ambadika Safodrano tondraky ny tondradrano